Setenil de las Bodegas: hunyanzvi hwekuveza ibwe | Absolut Kufamba
Setenil de las Bodegas: hunyanzvi hwekuveza ibwe
Alberto Makumbo | | Cádiz, España
En miganho yeCádiz, Anenge anobata mudunhu Malaga, riri guta vaiona Asset yeNational Tourist Kufariral nekuda kwezvikonzero zvakawanda. Asi mukuru wacho hapana mubvunzo kuti kugona kwake kuchinjira kugomo irimo Setenil de las Bodegas Yakavezwa makore akati wandei apfuura. Ungade here kuenda nesu kuguta iri remashiripiti muAndalusia?
1 Ipfupi nhoroondo yeSetenil de las Bodegas
2 Chii chaungaona mu Setenil de las Bodegas
2.1 Nhoroondo-Artistic Complex
2.2 Nhare yeSetenil
2.3 Chechi yeMukadzi wedu weMweya
2.5 El Lizón maonero
Ipfupi nhoroondo yeSetenil de las Bodegas
Kunyangwe iwo musi weiyo kuberekwa kwaSetenil de las Bodegas, nyanzvi dzinosimbisa kuti, kutonga nezvakasiyana zvinhu zvakawanikwa munzvimbo iri pedyo nenzvimbo iyi, guta racho raigona kunge riri inogarwa kweanopfuura zviuru zviuru zvemakore. Zuva rakapfuura kure nezviitiko zvakasiyana zvakaita kuti guta iri rive rakacherwa mugomo rimwe remaguta anoyevedza muAndalusia panguva yekukunda kwaNasrid kwakadzivirira kumaodzanyemba kweSpain neReconquest kwaizopera anopfuura mazana gumi emakore ekutonga.
Asi izvo zvaizove muna 1407 apo kutora kwainzi Villa de Setenil kwaizove kumwe kwekufamba kwakanyanya panguva yeReconquest. Nzvimbo yayo munzira inoenda kuGranada yakatungamira kuti ive yakadzorerwa zvakare muna 1407, kuve iyo nzvimbo yaizogara imba kusvika nzvimbo nomwe kubva mukutonga kwaJuan II weCastile kusvika pakukwira kweMambo wechiKaturike, kuzivikanwa se Sptem Nihil .
Atove pasi pehutongi hwechiKristu, Setenil akatumidzwa zita rekuti "villa de realengo", achigamuchira Chibvumirano cheRopafadzo muna1501 icho chaizokwezva mazita mazhinji akadaro nemataurirwo akafanana chete neaya aigarwa neguta reSeville panguva iyoyo. Kubva ipapo zvichienda mberi, iri dhorobha rine mbiri rakatanga nzira yaro yakagamuchirwa nemiti yemizambiringa inokura (saka rakakurumbira "de las Bodegas"), kuvhima nekuredza hove, ichiita imwe maguta ane mukurumbira muAndalusia.
Iyo yakasarudzika nharaunda yakashambidzwa nerwizi rweGuadalporcún ine chimiro chakanakisa chakashandurwa kugomo haina kungoshandura chete Setenil de las Bodegas kuva Yevashanyi Zvivakwa zveAndalusia, asi mukumira kunosungirwa kwekufona Nzira yeVachena Misha yeCádiz-Málaga. Muchokwadi, izvi zvinova zvinofanirwa-kuona kana iwe uri mumaguta akaita seJerez de la Frontera kana Ronda, akakwana masuwo eguta rekare iri uko kune zvakawanda zvekuona uye kuona.
Chii chaungaona mu Setenil de las Bodegas
Huru chena mapapu pakati penzvimbo dzesango dzeCádiz inoganhurana neMalaga, Setenil de las Bodegas inofadza njere. Iwe unongofanirwa kuswedera padyo nenzvimbo yayo inonyanya kuzivikanwa, iyo Cuevas del Sol Mugwagwa, kutarisa kuvepo kwedzimba dzese idzo dzakavezwa pagomo iro rinotsigira iro rese rekare guta. Mamiriro akanaka ekuti unakirwe netsvimbo uye zvinonaka zveCádiz, uchitora mukana wekutonhora kwematombo kana kunakidzwa nekuvapo kwemabalkoni anovhurika padombo guru.
Kufamba kusingagumi uye kwetsika uko, chokwadi, izvi zvinomira inotevera nzvimbo dzekuona mu Setenil de las Bodegas panguva yemangwanani, kunyange munyori uyu achikurudzira kudonhedza neguta panguva dzemanheru mukati memwedzi yezhizha, nekuti tembiricha dzinowanzo kuve dzakakwirira.
Mwoyo weguta, unotsanangurwa neambotaurwa pamusoro peCuevas del Sol mugwagwa, unoumba mukuru wevashanyi mapapu eStenil de las Bodegas; zvekuti rakatumidzwa zita Historic-Artistic Complex muna 1985. Nekuti pamusoro pezvose, Setenil inzvimbo yekufamba famba, kukurudzira runako rwechinzvimbo chakakomberedzwa kana kunakidzwa nezuva rematepi mune imwe yematunhu mazhinji anotarisisa rwizi ruchidarika nemuguta rekare. Seti yechena dzimba dzinosangana nemhando kwayo "Pokugara pasi pematombo" hunhu hwenzvimbo ino. Kana iwe uchitsvaga mamwe makona nerudzi urwu rweimba, usarasikirwa nekushanya kwenzvimbo senge Calle Mina, Calle Herrería, Calle Jabonería kana Calle Triana, vese vakatenderedza pamoyo peguta.
Yakagadzirwa mu zana regumi nematatu Munguva yekutonga kweMuslim, nhare iyi yeNasrid inoshumirwa senhare yakakwana inosanganisira yakaoma yekuvaka iyo inofadza vadikani venhoroondo. Kubva pashongwe dzayo makumi mana kusvika kumabhati ayo kana musikiti, iyo yemauto eSetenil inoramba ichive imwe yedzimba shomashoma dzechiMuslim dzinochengetedza yakawanda yemachira aro emumaguta.
Chechi yeMukadzi wedu weMweya
Chechi inonyanya kukosha muSetenil de las Bodegas Inosanganisira chikamu chenhoroondo yeguta sezvo yakavezwa muMudejar nemaGothic masitayera, sezvo nzvimbo yacho yakaumbwa nemachechi maviri, imwe neimwe yemaitiro akasiyana. Uye zvakare, Setenil inosanganisira dzakasiyana siyana dzezvivakwa zvechitendero senge isinganyanye kuda kuziva Hermitage yeSan Sebastián kana iyo Hermitage yeSan Benito.
Mushure mekuyambuka mugwagwa unozivikanwa weCuevas del Sol, uchafanirwa kukwira chikomo chemawere kubva kuCalle Ronda kusvika iwe wasvika kune inozivikanwa Plaza de Andalucía. Imwe yeiyo nzvimbo dzakakurumbira dzekuona muSetenil uko kune yakasarudzika mamiriro ekuparadzirwa pakati payo materu, ephemeral misika kana diki folkloric mhemberero.
El Lizón maonero
Imwe yeakanakisa eSetienil de las Bodegas anogara mukati maonero ayo. Nzvimbo idzo kunyangwe dzichisvika mushure memigwagwa yakati wandei dzakakodzera kushanyira kana zvasvika pakutora mufananidzo wakanaka. Usapotsa maonero eChechi yeMukadzi wedu weMweya kana iyo yaEl Lizón, iri mushure meManuel Galán Gardens uye yakanaka kuwana risingakanganwike panoramic yeiyi chena uye shava paradhiso.
Kana iwe ukazviwana iwe pachako uchitevera nzira yeVhite Villages, iyo Sierra de Grazalema nharaunda kana iro rine hupenyu guta reRonda, usarasikirwa nemukana wekuswedera padyo neguta renhoroondo iri kwaunogona kuwana hunyanzvi hwekugara hwakagamuchirwa nematombo.
Ungade here kushanyira Setenil de las Bodegas?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Setenil de las Bodegas: hunyanzvi hwekuveza ibwe
Iyo Bardenas Reales